Ranomasina afovoan'izao tontolo izao | Vaovao momba ny dia
Monica sanchez | | General, About us
Ny planeta Tany dia tsy manana velaran-tany voajanahary mahatalanjona fotsiny, toy ny ala Borneo na ny morontsirak'i Amerika tropikaly, fa misy ihany koa ranomasina anaty izay misy karazan-biby maro karazana ary aiza koa, ankafizinao ny mahita ireo tanàna eny amoron'ny morontsiraka.
Tianao ve izahay hitsidika ny ranomasina afovoan'izao tontolo izao? Amin'izao fotoana izao dia tsy mila manomana ny valizinao ianao, na dia azo antoka aza fa te hahita azy ireo eo an-toerana ianao avy eo, avy amin'ny sambo.
1 Ranomasina Mediterane
2 Ranomasina Aegean
3 Ranomasina Marmara
4 Ranomasina Mainty
5 Ranomasina Aral
6 Ranomasina Japon
7 Ranomasin'i Grau
8 Ranomasin'i Karaiba
9 Ranomasina Greenland
10 Ranomasina Beaufort
Andao atomboka ny fitsidihantsika ny fizahana ny Ranomasina Mediterane. Ity ranomasina "kely" ity dia entin'ny ranon'ny Atlantika, izay mamakivaky ny Selat Gibraltar. Sahabo ho 2,5 tapitrisa km2 ary 3.860km ny halavany. Avy any Karaiba avy eo, ny ranomasina ambanivohitra faharoa lehibe indrindra manerantany. Ny ranony dia mandro any atsimo amin'i Eropa, i Azia andrefana ary i Afrika avaratra.
Manohy ny diantsika mankany amin'ny Ranomasina Aegean, izay eo anelanelan'i Gresy sy Torkia. Manana velarana manodidina ny 180.000km2 izy, ary 600km ny lavany avy any avaratra ka hatrany atsimo, ary 400km manomboka atsinanana ka hatrany andrefana. Ao no ahitanao ny Nosy Turko any Bozcaada sy Gökçceada, ary ny Grika any Kreta na Kárpatos. Ilay anarana dia avy amin'ny mpanjaka Ateniana Aegean, izay nino fa ireo zanany lahy ireo dia maty novonoin'ny Minotaur, dia nilentika tany anaty ranomasina. Tantara mampalahelo ho an'ny ranomasina tsara tarehy toa an'i Aegean.
Raha tsy mandeha lavitra dia tonga isika izao Ranomasina Marmara, izay misy eo anelanelan'ny Ranomasina Aegean sy ny Ranomasina Mainty, izay misy ny Reniranon'i Dardanelles sy Bosphorus. Raha tsy fantatrao dia milaza aminao izahay fa ity ranomasina ity dia tsy latsaky ny 11.350km2 ny halavany. Mandeha mamakivaky ny ranomasina isika dia afaka mahafantatra ireo nosy sasany toa ilay Nosy Prince sy ny Nosy Marmara.
Tsy azoko ny Ranomasina Mainty. Eo anelanelan'ny atsimo atsinanan'i Eropa sy i Azia Minora dia misy ifandraisany amin'ny atsinanana amin'ny Ranomasina Aegean. Izy io dia manana velaran-tany 436.000km2 ary volume 547.000km. Ao amin'ity ranomasina ity no misy ny firenena Bulgaria, Georgia, Romania, Russia, Turkey ary Ukraine. Kolontsaina isan-karazany, fomba amam-panao samy hafa, toerana maro tsy mampino hahitana sy hankafizinao 😉.
El Ranomasina Aral Izy io dia iray amin'ireo farihy lehibe indrindra manerantany, izay mirefy 68.000km2. Amin'izao fotoana izao, maina izy io. Loza ity izay nofaritana ho iray amin'ireo ratsy indrindra tato ho ato. Raha te hahita azy dia mila mitodi-doha mankany Azia Afovoany ianao, manoloana ny firenena Kazakhstan sy Ozbekistan.
Tonga ny fotoana hirosoana mankany amin'ny Ranomasina JaponAmin'izao fotoana izao dia heverina ho ranomasina tena mampiady hevitra izy io noho ny habibiana amin'ny fihazana trondro feso any amin'ny morontsirak'ity ranomasina ity toa an'i Taiji. Ity fomban-drazana taloha ity, izay nolavin'ireo mpiaro ny biby ankehitriny, dia ankalazaina isan-taona amin'ny 1 septambra, ary mandritra izany fotoana izany dia voaloton'ny mena ny ranomasina noho ny ran'ny feso feso novonoina.
Ankehitriny isika dia mankany amin'ny faran'ny tany hafa, hahalala ny Ranomasin'i Grau, any Peroa. Grau no anarana ahafantarana ny ampahan'ny Pasifika izay mankany amin'ny morontsirak'ilay firenena. Io ranomasina io dia miitatra hatrany Boca de Capones ka hatrany Concordia, ka mandro tsy misy hafa 3.079 kilometatra ny torapasika.
El Ranomasin'i Karaiba io dia iray amin'ireo ranomasina tropikaly izay hitantsika eto amin'izao tontolo izao. Any atsinanan'i Amerika afovoany sy avaratr'i Amerika atsimo no misy azy. Miaraka amin'ny velaran-tany 2.763.800 2 XNUMXkmXNUMX, ny ranony mandro firenena marobe, toa an'i Cuba, Costa Rica, Barbados na Puerto Rico. Raha te hankafy moron-dranomasina manjelanjelatra sy toetr'andro malefaka ianao, eto dia azo antoka fa hanana fotoana mahafinaritra.
Fotoana izao handehanana mangatsiaka kely (na be 🙂). Mandeha mankany Greenland Sea, izay any amin'ny faritra avaratry ny Oseana Atlantika Avaratra. Eo anelanelan'ny morontsiraka atsinanan'i Greenland, ny Nosy Svalbard, ny nosy Jan Mayen ary Islandy. Izy io dia manodidina ny 1.205.000km2. Na eo aza ny maripana ambany azo soratana eto (ambany -10ºC), hahita biby maromaro monina ao anaty rano ao ianao, toy ny feso, feso, hazondamosina ary voron-dranomasinas.
Ranomasina mangatsiatsiaka hafa, ny Ranomasina Beaufort. Eo anelanelan'ny Alaska sy ny Northwest Territories ary ny Yukon, izay an'ny Canada no misy azy. Izy io dia manana velaran-tany 450.000km2, ary manana ny anarany ilay mpandinika hydrogère Irlandey Sir Francis Beaufort (1774-1857). Eto no misy ny Nosy Banks, nomena anarana ho fanomezam-boninahitra an'i Sir Joseph Banks (1768-1771), mpandala ny voajanahary, botanista ary mpikaroka izay nitarika ny Royal Society malaza tamin'ny 1819 ary izay naman'i James Cook tamin'ny diany voalohany.
Ary eto dia mifarana ny diantsika manokana. Ranomasina iza no tena tianao? Ary inona no kely kokoa?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ranomasin'izao tontolo izao
Eny, ohatra fotsiny no nomen'izy ireo ahy ohatra 4 na 5 ary koa tsy ny hanome vaovao izany ary mariho marobe fa tsy tiako loatra ity pejy ity ka dalith colordo mitady ranomasina fa tsy doka amin'ny gazety… ..nicole
bryan mejia dia hoy izy:
Pejy ratsy inona buuuuuuuuu
Mamaly an'i bryan mejia
zana-boromailala dia hoy izy:
Mamaly an'i pichon
miala dia hoy izy:
Pejy mahatsiravina inona no novakiako ary natory aho ajjaajajajajajajajajajajajajajaj
Mamaly any lavitra
Ny Ranomasina Karaiba, ny Ranomasimbe Pasifika, ny Ranomasina Arabo, ny Ranomasina Mena, ny Ranomasina Caspian, ny Ranomasina Tibor, karazana ranomasina manao ahoana izy ireo?
Mamaly an'i tutupia